Etu esi eji ahihia mmiri kpochie masks – Globalgistng
Home/Igbo/Etu esi eji ahihia mmiri kpochie masks
Obinna ChukwudiJune 11, 2020
Akwukwo mmiri bu akwukwo nri nke masiri ama nke oma na Naijiria dika otutu mmadu n’eji ya na ofe ofe. Ọ bụghị naanị na amịrị ahịhịa mmiri amụrụ amị na Naịjirịa kamakwa ọ bụ nwa amaala Mexico, The Caribbeans, West Africa, Central America na ọtụtụ South America.
Uru di egwu nke akwukwo ahihia bu ihe kpatara eji mara ya nke oma na ebo di iche-iche n’uwa nile. Peoplefọdụ ndị mmadụ na-eji akwụkwọ mmiri maka ofe, ebe ụfọdụ mmadụ na-eji ya maka ọgwụ yana iji agwọ ọrịa ụfọdụ ma ọ bụ ọrịa ndị ọzọ na-enwe naanị akwụkwọ mmiri dị ka ihe ọ drinkụ .ụ.
Uzo obula eji agba mmiri adighi ewepu abamuru ya.
NFỌD OTHER OTHERFỌD OTHER OTHERB OTHERR LE LEAT
• Akwụkwọ nri Ceylon
• Akwụkwọ nri Philippine
• Mkpụrụ osisi Florida
OGWU ANA EGO EGO LEWE LEAT
1) Na-egbochi ọrịa obi na ọnya afọ
2) Akwụkwọ mmiri na-akwalite ikike ịma ihe
3) A na-eji ya maka oke ibu
4) Na-agwọ ọrịa shuga
5) Mbelata cholesterol dị elu n’ime ọbara wdg.
Mpempe akwụkwọ mmiri nwere ụba vitamin dị ka vitamin A na C. nwekwara mineral dịka Iron na Calcium.
Mpempe akwụkwọ mmiri nwere ọtụtụ uru mana anyị ga na-elekwasị anya n’otú anyị ga-esi jiri ahịhịa mmiri na-emeso akara aka.
Akara akara ga – apụta mgbe akpụkpọ ahụ wee topụta ma gbasaa n’ihi ihe ụfọdụ dịka
• Ime afọ na ịmụ nwa
• Mmega ahụ
• bọta na-adịghị mma
• Azụ akpụkpọ wdg
Mpempe akwụkwọ nke mmiri nwere ụba antioxidant nke na-enyere aka rụkwaa akpụkpọ emebi emebi. mgbe ejiri mpempe akwụkwọ mmiri mee anụ ahụ nke nwere akara aka, ọ na-edozi ihe kpatara nsogbu ahụ.
Gwakọta mpempe mmiri gị n’ime akpa, igwe ihe ma ọ bụ blender ka ị wee wepụ ihe ọ juiceụ theụ dị na ya. Etinyekwala mmiri ka i wee nwee mmado. Kechie ya n’elu ebe inwere akara aka. were ya, ọ dịkarịa ala ugboro abụọ n’ụbọchị.